Apple ichagadzirisa iPhone 7 ine kufukidza kutadza kwemahara | IPhone nhau
Muna 2016 pakanga paine zvimwe zviitiko zvevashandisi veiyo itsva iPhone 7 uye iPhone 7 Plus umo, mushure mekushandisa iyo «Ndege modhi», pakanga paine matambudziko ekuvhara uye umo skrini yakaratidza kuti "Hapana sevhisi". Iine imwe nguva kumashure kwayo, Apple pakupedzisira ichagadzirisa iri dambudziko. Inotanga chirongwa chekugadzirisa yeiyo iPhone 7.
Zvinoenderana naApple muchirevo chayo, izvo vapedzisa kuti chidiki muzana cheiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus mamodheru anogona kuve nedambudziko rekuvhara mushure mekushandisa modhi yendege pavari. Mune zvimwe zviitiko uku kukundikana kudiki kwaive kwechinguva uye kune vamwe nguva yekumisikidza yaive yakareba zvakanyanya.
Kunze kwekunge iwe usatenga yako iPhone 7 kana iPhone 7 Plus kunze kweSpain, haufanire kunetseka nezve dambudziko iri. Zvinoenderana neavo vari muCupertino, zvikwata zvakakanganiswa zvakatengeswa pakati paGunyana wegore ra2016 naFebruary wegore irori ra2018. Ehe, nyika dzakakanganiswa ndedze: China, Macao, United States, Hong Kong neJapan. Naizvozvo, kunze kwekunge iwe wakashanyira imwe yenyika idzi panguva yatakakuudza uye ukatenga Apple terminal, haufanire kunetseka.
Zvakare, Apple inopa mimwe mirayiridzo. Uye rega akateedzana manhamba emhando ndidzo dzinoenderana nezvikamu zvakakanganiswa. Izvi zvinotevera:
A1660 uye A1780: Inotengeswa muChina
A1660: inotengeswa kuHong Kong, Macao uye United States
Aya manhamba anogona kuwanikwa kumashure kwechasisi uye pasi peiyo Apple logo uye chaiyo modhi. Isu tinokusiira iwe mufananidzo unokuudza iko kwekutarisa iyi kuverenga. Saizvozvo, Apple ichataura nevatengi kuburikidza neemail kuitira kuti uenderere mberi nekudzoserwa. Uye zvakare, zvinokurudzirwa kuti kana pakupera kwaKurume 2018 vakasasangana nemunhu akabatika, ndiye mushandisi anoonana nekambani kuti aenderere mberi nekugadzirisa kana kudzorera mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Apple ichagadzirisa iPhone 7 ine kufukidza kutadza kwemahara
Iyi inogona kuve iri mhuri yePodPod yese